किन यस्ता छोटो लुगा लगाएर मिडियामा आइन यी युवती ? ज्योति मगरको भन्दा पनि अझ हट अवतार (भिडियो सहित) – Complete Nepali News Portal
किन यस्ता छोटो लुगा लगाएर मिडियामा आइन यी युवती ? ज्योति मगरको भन्दा पनि अझ हट अवतार (भिडियो सहित)
झापा दमक । गायिका ज्योति मगरलाइ हट र सेक्सी गायिका तथा मोडल भनेर चर्चा भै रहेको बेला अर्की अझ हट भएर मेघा मगर मिडियामा आएकी छिन् । मेघा मगर बिशेषत् डान्स गर्ने गर्छिन र डान्स क्लास पनि गर्छिन । उनले अन्तरबार्तामा आएर आफु हट भएको बिषयमा आफ्ना कुराहरु राखेकी छिन् । म्युजिक भिडियोमा पनि कोरियोग्राफर गरेको र अभिनय गरेको पनि उनले बताएकी छिन् ।
आफुले छोटो छोटो लुगा पहिले बतानै लगाउदै आएको बताएकी छिन् । छोटो लुगा लगाएर बाटोमा हिड्दा मनिषहरुले कस्तो जाडो नाबह्येको होला भन्दै जिस्काएको अनुभब भएको बताएकी छिन् । छोटो लुगा लगाऊदैमा कुनै पनि नराम्रो भन्ने हैन भन्दै उनले बताएकी छिन् । साथै उनले सेक्सको बिसयमा खुलेर बोलेकी छिन् । तल भिडियोमा सबै जानकारी हेर्नुहोला ।